Fanovana sy vaovao ho an'ny LinuxMint 15 | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fitsinjarana, GNU / Linux, About us
Mamaky ao amin'ny Webupd8 Hitako fa nohavaozina ny Tondrozotra Linux Mint 15, izay hisy vaovao sy fiasa mahaliana sasany.
Ho an'ity kinova ity Linux Mint tsy maintsy ampidirina Cinnamon 1.8 izay hahitana fiasa vaovao toy ny Desktlets (Widget amin'ny birao) dia tokony ho misy amin'ny alàlan'ny toerana misy anao: System Monitor, frame ho an'ny fampisehoana sary / horonan-tsary ary Terminal
Amin'ny safidin'ny kanelina hanana ny fahafaha-mikaroka, mametraka, manaisotra ary manavao ireo lohahevitra Shell, applet, extensions ary birao lavitra isika.
Fanohanana ho an'ny bumpmaps, izay mamaritra ny firindrana mangarahara toa ny vera voapaika, araka ny hita amin'ny sary teo aloha. Natao hampidirina ny configurations an'ny GNOME y kanelina ao amin'ny Ivotoerana fanaraha-maso tokana.
Ny zavatra hitako fa mahaliana dia ny tsy maintsy asian'izy ireo kodiarana Kanelina 2D mba tsy hampiasa CPU be loatra. Mieritreritra ny hampiasa ianao Muffin u OpenBox hitantana ny varavarankely sy ny fandikana azy.
Ho an'ny ambiny, ilaina ny manatsara ny applet kanelina, hatovana ny sakafo ny mampiavaka ny mintMenu, ampidiro mpampahalala mailaka vaovao sy safidy hafa. Azonao atao ihany koa ny manamboatra ny volavolan-doko amin'ireo lohahevitra ary manaova ny Hetsika amin'ny Kalandrie mitovy amin'ireo KDE.
Nemo tokony hahazo fiasa vaovao ianao ary koa API ho an'ny Action, fitantanana kapila (miaraka amin'ny fampidirana Mintdisk), fisehoan-javatra fizahana rakitra ary fanatsarana ny interface interface. araka Andrei, ny kinova farany an'ny Nemo Ao amin'ny GIT dia efa manana fiasa mahafinaritra, toy ny sidebar nohavaozina izay mampiseho ankehitriny ny habetsaky ny toerana malalaka ampiasaina isaky ny kapila na ny bokotra zoom raha hitanao amin'ity sary manaraka ity:
Fanovana hafa mety hitranga azontsika antenaina Linux Mint 15 Anisan'izany ny fanatsarana ny interface interface ho an'ny Manager Software sy ny installer, mpanangona efijery vaovao, ary na ny mety hanovana DPKG ho mpitantana fonosana iray aza dia voatonona, izany hoe, manombatombana izany izy ireo amin'ny fahitana ny tombony sy ny lafy O_O. Afaka mahita an'io ianao ary bebe kokoa amin'ny Ity rohy ity toy ny efa akaiky ny faran'ny Ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Fanovana sy vaovao ho an'ny LinuxMint 15
Tiako hatrany ny Mint, atoroko LMDE ho an'ireo mpampiasa vao na aiza na aiza.
Na dia efa nampiasaiko efa ela aza aho dia nanaraka ny làlana satria toa distro mahafinaritra be ho ahy ny mijery azy ary mora ampiasaina.
Tsara kokoa ny manolo-kevitra ny Linux Mint, ny LMDE dia tsy natao ho an'ny zaza vao teraka, angamba tsara raha dingana faharoa aorian'ny fanandramana Linuxmint ary te hianatra bebe kokoa
Manantena aho fa ity kinova vaovao an'ny Kanelina ity dia tiako kokoa noho ny teo aloha.
Tsy tiako ny manoro hevitra izay misy fofona toa an'i ubuntu na inona na inona toe-javatra ... Nampiasako ny LMDE ary toa distro mety ho an'ny mpampiasa vaovao izy, mazava ho azy fa manome safidy aho ...
Miombon-kevitra amin'ilay farany aho. LMDE dia Debian ho an'ireo vao teraka (farafaharatsiny hatramin'ny nandehanan'ny Ubuntu ny fombany).
Anisan'ireo vaovao hafa, ny pack Update 6 ho an'ny LMDE dia efa miditra
Isaky ny mandroso ny kanelina dia vao mainka mitovy amin'ny DE iray fantatsika rehetra izany. Betsaka amin'ireo endri-javatra ireo, amin'ny foto-kevitra sy endrika ivelany, no efa ao amin'ny KDE ary vaovao tsara fa nampifanaraka azy ireo i Cinnamon. Na dia mbola mieritreritra aza aho fa ireo distro rehetra nanohitra ny Gnome Shell dia afaka nitsambikina nankany Qt ary nandeha tamin'ny lalana mora. Ho voatahiry ny loharanom-pahalalana ary ho tanteraka izany amin'ny fotoana fohy.
FeRe dia hoy izy:
Hitsahatra tsy hampiasa .deb ve izy ireo sa hanova DPKG fotsiny?
Mamaly an'i FeRe
Midika ve ny fanovana ny DPKG fanovana ny fonosana .deb?
[Soso-kevitra] Fametrahana rindranasa .msi amin'ny divay